तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ? - नेपालबहस
गृहपृष्ठ › राशीफल › दैनिक
ज्योतिषी : गणेश काफ्ले
| ५:२०:१७ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल जेठ २० गते बिहीबार । ईश्वी सन् २०२१ जुन ०३ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । राक्षस संवत्सर । उत्तरायण । ग्रीष्म ऋतु । श्रीशाके १९४२ । जेठ कृष्णपक्ष । तिथि– अष्टमी,०० घडी ४४ पला, बिहान ०५ बजेर २८ मिनेट उप्रान्त नवमी । नक्षत्र–पूर्वाभाद्रपदा,४३ घडी १४ पला, बेलुकी १० बजेर २८ मिनेट उप्रान्त उत्तराभाद्रपदा । योग– विश्कुम्भ, ०४ घडी १४ पला, बिहान ०६ बजेर ५१ मिनेट उप्रान्त प्रिती । करण– कौलव, बिहान ०५ बजेर २८ मिनेट उप्रान्त तैतिल,बेलुकी ०५ बजेर ३५ मिनेट उप्रान्त गर । आनन्दादिमा–मुद्गर योग । चन्द्रराशि–कुम्भ,बेलुकी ०४ बजेर ११ मिनेट उप्रान्त मीन । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०५ बजेर १० मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ५४ मिनेट । दिनमान ३३ घडी २१ पला ।
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) :- सरकारी सम्पती तथा पैत्रिक सम्पती हात लागी हुने प्रसस्त सम्भावना रहेको छ । दाजुभाई वा अग्रजहरुको सुझाब तथा सल्लाह मानेर अगाडी बढ्दा सफलता पाउन सकिनेछ । बिद्यामा राम्रो प्रगती हुने हुँदा पढाईलेखाईमा मन जानेछ । बौद्धिकता प्रयोग गरी समाजमा राम्रा काम गरेर देखाउन सकिनेछ भने आस मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) :- पैत्रिक कामबाट मनग्गे लाभ लिन सकिने तथा पैत्रिक सम्पतिको प्रयोग गरि सुदृड हुन सकिनेछ । नोकरीमा उच्च पद प्राप्तीको गतिलो सम्भावना रहेको छ । लक्ष्य प्राप्तीको लागि चालिने पाईलाहरु सकारात्मक दिशामा अगाडी बढ्नेछन् । पढाईलेखाई अरुभन्दा एक कदम अगाडी नतिजा ल्याउन सकिनेछ । प्रेममा नजिक हुने समय रहेको छ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) :- धार्मिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा सहभागी भई नतिजा हात लगाउन सकिनेछ । प्रेम प्रशङगमा रमाउन चाहनेहरुका लागी समयले साथ दिनेछ । समयले साथ दिने हुनाले सानो प्रयत्नले राम्रा काम हुनेछ । खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्र स्वत स्फुर्त रुपमा अगाडी बढ्नेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लगानी गरि राम्रै आम्दानी गर्न सकिनेछ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) :- कामहरु समयमा नसकिने तथा अरुबाट बाधा व्यवधान हुने हुनाले मानशिक तनाब बढ्नेछ । मनोबल कमजोर हुने हुनाले काम गर्न जोस जागर हराएर जानेछ । पढाईलेखाई तपाई आफ्नै कारणले बिग्रने हुँदा अरुभन्दा पछि परिनेछ । प्रेम प्रशङग टाडै रहनुहोला प्रीय पात्रसँग मनमुटाव सिर्जना हुनेछ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ । बिधिबिधान तथा कानुन सम्बत् काम गर्नुहोला दण्ड तथा जरिवाना हुने ग्रहयोग रहेकोछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) :- कामको चाप र थकाइबाट मुक्त रही विश्राम पाइनेछ। परिवारजनको साथले नयाँ आशा पलाउनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ। विभिन्न उपहार पाइनुका साथै आयआर्जन पनि राम्रै हुनेछ। अतिथिका रूपमा सम्मान पाइने समय छ। जीवन साथिको सहयोग पाईने योग रहेकोछ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लगानी गरि राम्रै आम्दानी गर्न सकिनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) :- व्यवसायमा लगानी बढाई आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ । पुरानो रोग तथा समस्याहरु स्वत ठिक भएर जानेछन् । मामा तथा मावलीबाट तपाईको काममा सहयोग हुनेछ । पढाईलेखाईमा अरुभन्दा अग्र पंतिमा तपाईको नाम आउनेछ । अदालतबाट आउने निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउने हुनाले एक किसिमको उमङग शरिरमा आउनेछ । मायाप्रेममा नजिक भई रमाउन सकिनेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) :- अध्ययन तथा अध्यापनमा समय राम्रो रहेकोले भनेजस्तो उपलब्धी हासिल गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा मन पर्ने मानिसबाट उपहार तथा बिलाशि वस्तु प्राप्तीको योग रहेकोछ । सन्तान तथा छोरा छोरीको प्रगती देख्न पाईनेछ । बैक तथा बित्तिय क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लगानी गरि राम्रै आम्दानी गर्न सकिनेछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) :- कुनै काम शुरु गर्नुभन्दा पनि पुरानै कामहरुलाई निरन्तरता दिनुहोला । चाहदा चाहदै पनि घरायसी शुख सुबिधाहरु प्रयोग गर्न नपाउदा मन खिन्न हुनेछ । काम बिग्रने हुँदा राजकिय सम्मान पाउने योग टरेर जाने तथा राजनीतिमा प्रतिस्पर्धीहरु हावी हुनेछन् । छातिमा देखिने समस्याका कारण काम गर्न नसकेजस्तो हुनेछ । घर परिवार तथा साथिहरुबाट टाडिएर परदेशको यात्रा गर्नुपर्दा असहज महशुस हुनेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) :- मायाप्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ भने पतिपत्नीबीच एक अर्कालाई बिश्वास गर्दै अगाडी बढ्न सकिनेछ । आट,पराक्रम गर्न नडाराई अगाडी बढ्ने हो भने चाहेको गन्तब्यमा पुग्न सकिनेछ । विवाद तथा हुलमुलका बीच पनि राम्रा तथा परिणाममूखि काम गर्न सकिनेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना भनाई वा लेखहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) :- असजिलो परिस्थिती हरुलाई बुद्धिमता पुर्वक सहजतामा ढाल्न सकिने छ । मायाप्रेमको गाठो कसिलो हुनेछ भने जीवनसाथिको सहयोगले उत्पादन मुलक काम गर्न सकिनेछ । पारिवारिक सभा समारोहका सहभागी भई मिठो मसिलो भोजन ग्रहण गर्न अवसर प्राप्त हुनेछ । कलाकारिता तथा फिल्मी क्षेत्रमा समय लगानी गर्नेहरुको नाम तथा दाम दुबै कमाउने ग्रहयोग रहेको छ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) :- नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ भने गन्तव्य पहिल्याउन सहज हुनेछ । प्रेममा एक अर्कालाई बुझ्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । नोकरीमा प्रवेश तथा पदोन्नतीको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । राजनीति तथा समाजसेवामा समय लगानी गर्नेहरुले समयको सुक्ष्म व्यावस्थापन गर्न सके मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा कमाउने समय रहेकोछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) :- स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्या देखापर्न सक्ने तथा उपचार खर्च बढ्ने योग रहेको छ । अल्छि गर्ने बानिले कामहरु बिग्रन सक्छ । अनावश्यक खर्च बढ्ने हुँदा दैनिक खर्च बढेर जानेछ । न्यून पारिश्रमिकमा दिनभर समय व्यतित गर्नुपर्दा अन्य काममा समय दिन सकिने छैन । मायाप्रेममा सामान्य मनमुटाव सिर्जना हुनेछ । साझको समय राम्रो रहेकोले कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लगानी गरि राम्रै आम्दानी गर्न सकिनेछ । तपाईको दिन शुभ रहोस् ।
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ? ८ घण्टा पहिले
तपाईकाे साप्ताहिक राशीफल [ असार ०६ गते आइतबारदेखी असार १२ गते शनिबारसम्म ] १ दिन पहिले
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ? १ दिन पहिले
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ? २ दिन पहिले
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ? ३ दिन पहिले
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ? ४ दिन पहिले
कर्णालीका राउटेका लागि एकीकृत नीति बनाउने तयारी ३ मिनेट पहिले
कांग्रेसलाई लाग्यो महाधिवेशनः देउवामा बढ्यो सकस ५ मिनेट पहिले
कोरोनाको मुख्यथलो बन्दै रोपाइँ १० मिनेट पहिले
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी १७ मिनेट पहिले
सरकारी एम्बुलेन्स प्रयोगबिहीन हुँदा बिरामी मर्कामा २५ मिनेट पहिले
अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले अवितरित हकप्रद लिलामी ल्याउँदै २७ मिनेट पहिले
मलाई त तै सुवा मन पडी बजारमा सार्वजनिक ४१ मिनेट पहिले
योग परम्परालाई नयाँ उचाइबाट अघि बढाइनुपर्छः उपप्रम पौडेल ४५ मिनेट पहिले
अपि पावर कम्पनीको हकप्रद शेयरमा असार ९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने ४५ मिनेट पहिले
सल्लेरीका विस्थापित परिवारलाई हेलिकप्टरबाट राहत सामग्री पुर्याइयो ५० मिनेट पहिले
अमेरिकाको अलाबामामा भएको दुर्घटनामा परी ९ बालबालिकासहित १० को मृत्यु ६० मिनेट पहिले
रक्तचापको श्रेणी कसरी थाहा पाउने ? २ घण्टा पहिले
पशुपालनबाट आयआर्जन वृद्धि गराउन ‘एक घर एक पशु बीमा’ कार्यक्रम लागू २ घण्टा पहिले
आँधीखोलाले ‘जाऊ’ हैं अन्धाअन्धी श्रवणकुमार अभियान’ समेट्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक १८ घण्टा पहिले
ओली जिम्मेवार बने एकै दिनमा सहमति हुन्छ ! ५ घण्टा पहिले
काश्मिरका रेल स्टेशनहरुमा निःशुल्क वाइफाइ सेवा १४ घण्टा पहिले
पक्की पुल नभएपछि अस्थायी पुलबाट आवतजावत २ घण्टा पहिले
महालक्ष्मी विकास बैंकले १ लाख ६६ हजार कित्ता संस्थापक शेयर बिक्री गर्दै ५ दिन पहिले
नगर अस्पतालको आधुनिक भवन निर्माण शुरु ५ दिन पहिले
यी तीन हाइड्रो कम्पनीको सर्किट लेभलमा कारोबार, खरिदकर्ता कति ? ६ दिन पहिले
जर्मनीले सहयोगस्वरुप नेपाललाई ४ अर्ब ८० करोड दिने ७ दिन पहिले
आजदेखि महिला भलिबल टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु ६ दिन पहिले
महोत्तरीमा एक साता निषेधाज्ञा थप ६ दिन पहिले
अवैध दोहन हुने क्रम नरोकिएपछि ‘कालीगण्डकी सभ्यता बचाऔँ अभियान’मा युवा सक्रियता १ दिन पहिले
भेरी अस्पतालले सार्वजनिक गर्यो घटनाको विवरण ३ हप्ता पहिले
ज्यानमारा भाइरसबाट त्रिविका २३ जना कर्मचारीको निधन ३ हप्ता पहिले
महिला लघुवित्तको शेयरमा लाग्यो सकारात्मक सर्किट, शेयरमूल्य कति ? २ हप्ता पहिले
बालबालिकामा इन्टरनेट गेमको लत बढ्दै, अभिभावक चिन्तित ! ३ हप्ता पहिले
खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका चौधरीको शव फेला ५ दिन पहिले
क्रिकेट खेलाडीको खेल भत्ता बढ्यो, अब कति पाउँछन् ? २ हप्ता पहिले
जिल्ला अस्पतालमा ४ महिनापछि एचडियू श्यया सञ्चालन ३ हप्ता पहिले
शनिबार नेपालले इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने ३ हप्ता पहिले
भारतबाट आएका एक युवक आइसोलेसनमा भर्ना १ वर्ष पहिले
भ्रष्टाचारबिरुद्ध तरुणदल स्याङ्जाको मोटरसाईकल र्‍याली २ वर्ष पहिले
उपयुक्त उपाय अवलम्वन गर्नुपर्ने मागसहित एम्नेस्टीको ध्यानाकर्षण १ वर्ष पहिले